BORGI DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Borgi Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Xuduudaha Collie / Welsh Corgi eeyaha isku dhafan ee isku dhafan
'Tani waa Lizzy, Borgi-geena (Xadka Collie / Pembroke Corgi) oo jira 5 sano. Iyadu waa eey cajiib ah! Waxaan ku helnay iyada oo jirta 4 bilood. Way jeceshahay qof walba, dad iyo duunyoba si isku mid ah. Waxyaabaha ay ugu jeceshahay waa Tucker, iskutallaabteena yar ee 4-jirka ah ee Doxi / Pekapoo. Lizzy waxay leedahay dabeecad deggan oo ka mid ah Corgi, oo aan sidii 'mashquul' u ahayn Xudduudka Collie. Iyadu waa eey cajiib ah dibedda iyo gudahaba. Haddii aysan ahayn daadinta (sida dhabta ah 'jajabinta dharka' sida Corgis!) Waxay noqon laheyd eeyga adduunka ugu fiican :-) '
Borgi maahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Soohdinta Collie iyo Welsh Corgi (Pembroke ama Cardigan). Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
'Kani waa xadkayaga Collie / Pembroke Welsh Corgi oo iskutallaabta u ah cunug yar oo 4-bilood jir ah. Aad bay u macaan tahay oo dabeecad wacan ayey leedahay. Waxay saaxiibtinimo badan la leedahay dhammaan wixii ay la kulanto. Sababtoo ah labada noocba waxay ku jiraan kooxda xoolaha, waxay u muuqataa in iskutallaabtan ay tahay mid wanaagsan. Lizzy waxay leedahay lugaha yar, gaagaaban sida Corgi, laakiin waxay leedahay dabo dheer sida aabaheed oo ah Border Collie. Dhagaha Lizzy waxay u muuqdaan kuwo rogrogmaya, laakiin marar badan waxaad arkaysaa iyada oo leh hal dhag oo u taagan sidii Corgi. Daliil ahaanna caqligeeda, caqligeeda caqliga badan, waxay nagu qaadatay laba maalmood oo keliya in aan guriga wada dhigno! Waxaan ka soo iibinay qoys ku nool beer leh fardo, lo ', digaag iyo seddex caruur ah, laakiin waxay umuuqatay inaysan dhib ku qabin la qabsiga gurigeenna magaalada. Waxay jeceshahay inay seexato oo ku ciyaarto sariirteenna waxayna ku heshay barkin ay jeceshahay-xariir, taas! Mararka qaar ka gudubka laba nooc ayaa si xun u soo bixi kara, laakiin Lizzy, waxay umuuqataa dhamaan sifooyinka wanaagsan ee labadan caqli leh inay soo mareen! '
'Corky waa ilmahayga 8 jir ee Corgi / Border Collie ey. Aad ayuu u firfircoon yahay, in kasta oo uu 8 jir yahay, laakiin weli waqti buu u qabtaa inuu ku dhegto. Waxaan u maleyneynaa inuu u eg yahay dawaco. Waxyaabaha uu jecel yahay waxaa ka mid ah ciyey, hurdada horteeda dabka, baacsiga gawaarida waaweyn iyo ku calalinta alaabta caruurtu ku ciyaaraan. '
Stoli the Borgi oo 3 jir ah— 'Waxaan u iibsanay Stoli badal ahaan eeyga ay jeceshahay hooyaday, a Corgi / McNab taasi way dhaaftay, iyadoo ah hadiyadii Kirismaska ​​ee Hooyada. Laakiin waxay noqotay mid wax badan ka duwan! Aad ayey u faraxsan tahay una koolkooliso marwalba waxayna jeceshahay inay kula ciyaaraan qashinka eeyaha waaweyn! Iyadu sidoo kale waa wada sheekaysi wanaagsan, maxaa yeelay waxay ku daba socotaa dhinaceeda Corgi dhererkeeda laakiin dhinaca midabkeedu yahay Collie. Dadka badankood way qoslaan markay arkaan iyada dhogorteeda xiirta waxay u egtahay inaysan lugaha lahayn! '
Liistada eeyaha loo yaqaan 'Corgi Mix Breeds Dogs'
Liiska Pembroke Welsh Corgi Mix Eeyaha Taranka
Liiska eeyaha eeyaha Cardigan Welsh Corgi
poodle iyo king charles iskudhafka cavalier
madow iyo caddaan weyn
riwaayad isku dhaf ah feeryahan Ameerikaanka